Tag: mubhadharo watinya ” Martech Zone
Tag: bhadhara pakudzvanya
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Hapana mubvunzo kuti chero munhu anoshanyira saiti yangu haazive kuti ndinoita mari saiti neGoogle Adsense Ndinoyeuka pandakatanga kunzwa Adsense ichitsanangurwa, munhu wacho akati yaive Webmaster Welfare. Ini ndinowanzo bvumirana, haina kana kubhadhara yangu yekutambira mitengo. Nekudaro, ini ndinotenda kudzikisa mutengo wesaiti yangu uye Adsense yakanangwa nenzira yavo neyakafanira kushambadza. Izvo zvakati, chinguva chidiki ndakachinja marongero angu eAdsense
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Adzooma ndeye Google Partner, Microsoft Partner, uye Facebook Kushambadzira Partner. Vakavaka yakangwara, inyore-kushandisa-puratifomu kwaunogona kubata Google Ads, Microsoft Ads, uye Facebook Ads zvese zviri pakati. Adzooma inopa zvese mhinduro yekupedzisira kumakambani pamwe nesarudzo agency yekugadzirisa vatengi uye inovimbwa nevashandisi vanopfuura gumi nemaviri. NaAdzooma, unogona kuona kuti mishandirapamwe yako irikuita sei nekutarisa nemametric akakosha akadai seImpressions, Dzvanya, Shanduko.
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Mubvunzo wandichiri kubvunzwa nevaridzi vebhizimusi vakura ndewokuti vangaite here kana kuti kwete kubhadhara-per-click (PPC) kushambadzira kana kwete. Haisi yakapusa hongu kana kwete mubvunzo. PPC inopa mukana unoshamisa wekusundira kushambadza pamberi pevateereri pakutsvaga, zvemagariro, uye mawebhusaiti iwe aungasvike kazhinji kuburikidza nenzira dzehupenyu. Chii chinonzi Pay Per Click Kushambadzira? PPC inzira yekushambadzira pamhepo uko mushambadzi anobhadhara a
Nguva Yokuverenga: 6 maminitsi Gore rino ndakatora akati wandei mabasa ekuda. Imwe yaive chikamu chebudiriro yangu yehunyanzvi, kudzidza zvese zvandaigona nezvehungwaru hwekugadzira (AI) uye kushambadzira, uye imwe yacho yakanangana nekutsvagiswa kwegore neyakajairwa chiziviso cheat tech, zvakafanana nezvakapihwa pano gore rapfuura - 2017 Native Advertising Technology Landscape. Ini ndaisaziva panguva iyoyo, asi ebook rese rakabuda mune yakatevera AI research, "Zvese zvaunoda iwe